“Haddii Guardiola uu ku guuleysto waxa Zidane uu ku guuleystey, waxaad heli doontaa dad ku heesaya gurayaha korkooda”… McManaman – Gool FM
(Engladn) 24 Maajo 2018. Xidigii hore kooxda Real Madrid iyo xulka qaranka England Steve McManaman ayaa xaqiijiyay in macalinka kooxda Real Madrid Zinedine Zidane inuusan wali ka helin qiimahii uu mudnaa saxaafada iyo jamaahiirta.
Hadalkan kasoo yeeray Steve McManaman ayaa wuxuu imaanayaa kahor kulanka finalka Champions League ay kuwada ciyaari doonaan kooxaha Real Madrid iyo Liverpool sabtida soo aadan.
Steve McManaman ayaa Liverpool u ciyaaray sagaal xilli ciyaareed ka hor inta uusan u dhaqaaqin Real Madrid 1999-kii, wuxuuna 4 xili ciyaareed ka garab ciyaaray Zidane.
McManaman ayaa aamisan in guulaha uu Zinedine Zidane la gaaray Real Madrid in ay ahaayeen wax cajiib, kadib markii ay Los Blancos gaartay saddex xili ciyaareed xiriir ah finalka Champions League.
Halyayga reer England ayaa wuxuu tilmamay in tababaraha Manchester City ee Pep Guardiola uusan gaarin guulaha Zidane oo kale, inkastoo dadka ay ku amaanaan dhadhan la’aan.
“Ma siinayaan Zidane wax filan uu xaqa u lahaa, wuxuu soo leyliyay koox xaalad adag ku sugnayd, ciyaartoyda kuma faraxsaneyn markii loo magacaabay tababaraha Real Madrid”
“Hada fiiri, wuxuu ku guuleystay labo koob oo Champions League ah, waxaana uu gaadhay finalka markii saddexaad ee xiriir ah, hadii uu Guardiola sidaas sameeyn lahaa, waxaad heli doontaa dad ku heesaya gurayaha korkooda”.